Sabotsy 02 Febroary 2019. – FJKM
Sabotsy 02 Febroary 2019.
2 Samoela 19.1-15
Misy lesona maro ho an’ny olona manana toerana ambony ity tantara ity:
1-Tsy azo avela hanindry ny maha-olon’ny vahoaka ny fihetsehampo manokana:raha mitomany ny zanany i Davida , rariny izany , sady efa nanafatra rahateo ny tsy hamonoana azy izy . Saingy , ny fidradradradrany dia hisy akony tena ratsy eo amin’ny vahoaka , ka tsy maintsy nampangininy . Mafy izany , kanefa ny mpitondra rehetra tsy maintsy mampandefitra ny fihetsehampony manokana eo anoloan’ny adidiny .
2-Tsy azo avela hanao ny tsy mety ny lehiben’ny tena : na mpanjaka aza i Davida, tsy nijery azy fotsiny i Joaba fa niteny azy. Ary izany no tsy nitrangan’ny loza izay nety hahapotika ny tohin’ny fiainan’i Davida. Mila mpanolo-tsaina sahy toy izany hatrany ny mpitondra , ary ny mpiara-miasa koa , tsy tokony ho olona mpanasohaso lava izao fotsiny .
3-Tsy azo avela tsy hahalala ny tokony hataony ny olom-pehezina : I Davida mihitsy no nandefa teny tamin’ireo avy amin’ny firenena Joda , foko niaviany mba hampodian’ireo azy. Nahamenatra tokoa manko raha izy ireo izay tena tompony indray no tsy hahalala ny tokony hatao , nefa ny Israely aza nampody an’i Davida. Eny , zaza mandrakariva tokoa ny vahoaka ka mila mpitarika hanoro azy ny tokony hataony .